भगवान को कवच:6भागहरु व्याख्या र अर्थ?
के तपाईंलाई थाहा छ? परमेश्वरको हतियार?
युद्धमा जस्तै, जहाँ सिपाहीहरूलाई टाउको, हतियार र अन्य उपकरणहरूको रक्षा गर्न हेलमेटहरू जस्ता विशेष आर्मरको आवश्यकता हुन्छ।
En संसार आध्यात्मिक, हामीलाई पनि एउटा आर्मर चाहिन्छ जसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ र हामीलाई जीवनमा आउन सक्ने सबै कठिनाइहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
विशेष गरी एफिससको अन्तिम अध्यायमा परमेश्वरको वचनमा, प्रेरित पावलले लेखेको एउटा पत्रले सबै विश्वासीहरूलाई दुष्टको विरूद्ध लड्न र हतियार लिनको लागि परमेश्वरको हतियार प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ।
आध्यात्मिक संसार निरन्तर लडाईमा छ र त्यसैले हामी सबै समय तयार हुनुपर्छ।
1 ईश्वरको मार्गका अंशहरू
1.1 १: सत्यको बेल्ट
1.2 २: न्यायको कवच।
1.3 :: सुसमाचारको तयारी
1.4 :: परमेश्वरको हतियारमा विश्वासको ढाल
1.5 :: परमेश्वरको हतियारमा मुक्तिको टोप
1.6 :: परमेश्वरको हातहतियारमा आत्माको तरवार
ईश्वरको मार्गका अंशहरू
यस आर्मरमा आध्यात्मिक उपकरणहरूको श्रृंखला समावेश छ जुन तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्नको लागि, तपाईंले ती कसरी प्रयोग हुन्छन् भनेर जान्नुपर्दछ र त्यसैले अब हामी तपाईंलाई आध्यात्मिक आर्मरको साथ तपाईंको रक्षा गर्न तपाईंले गर्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं।
१: सत्यको बेल्ट
एफिसी 6:१:14 मा सत्यको बेल्टको नाम राखिएको छ। शारीरिक र पुरानो समयमा, सिपाहीहरूले शरीरलाई समर्थन प्रदान गर्दै ट्युनिक फर्म राख्नको लागि बेल्ट लगाउँथे।
आध्यात्मिक अर्थमा, बेल्ट त्यो ज्ञान र सुरक्षा हुन्छ जसले हामीलाई दृढ अडान गर्दछ, हामी हौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छ भगवानका छोरायद्यपि दुष्टले हामीलाई मनाउन चाहान्छ।
सत्यको बेल्टको उचित उपयोग गर्न हाम्रो हृदयले प्रभुको वचनले भरिपूर्ण हुनुपर्दछ हामीले प्रार्थनाको साथ आफूलाई बलियो पार्नुपर्दछ। हामीले ख्रीष्टको मार्गमा पूरा र स्थिर जीवन बिताउनुपर्दछ।
२: न्यायको कवच।
जस्तो प्राचीन समयमा शेल थियो, जससँग आन्तरिक अ organs्गहरू ढाकिएका थिए, किनकि अब हामी बुलेटप्रुफ भेष्टको रूपमा चिनिन्छौं।
आध्यात्मिक संसारमा हिंड्ने सिपाहीहरूले हाम्रो हृदय सबै शत्रुको आक्रमणबाट जोगाउनु पर्छ।
न्यायको कवच त्यो कभर हुन्छ जुन हामीलाई दिन्छ न्याय हामी येशू मार्फत प्राप्त गर्दछौं र उहाँले हाम्रो लागि त्याग गर्नुभयो कलवरीको क्रस हो।
यसलाई ठीकसँग प्रयोग गर्न हामीले ख्रीष्टमा भएको हाम्रो चिनारीलाई याद गर्नै पर्छ, हामीले बुझ्नु पर्छ कि उहाँको बलिदानको लागि धन्यवाद भनेको स्वर्गीय पिताको सामु हामी धर्मी ठहरिन्छौं।
हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं कि शत्रुले के भन्छ वा उनीहरूको आरोपहरू गर्छन् वा हाम्रो विगतको जीवन वा हाम्रा पापहरू सम्झिरहेका छन्।
ती दुष्टले हामीलाई चोट पुर्याउने रणनीतिहरू हुन् र न्यायको ब्रेस्टप्लेटले हामीलाई यी आक्रमणहरूबाट बचाउँछ।
:: सुसमाचारको तयारी
प्रत्येक योद्धाले आफ्नो खुट्टालाई आक्रमणबाट जोगाउनु आवश्यक छ किनकि यी शत्रुका लागि महत्वपूर्ण लक्ष्य पनि हुन्।
यदि सिपाही आफ्नो हिड्ने कुरामा दृढ छैन भने यसलाई हटाउन सजिलो छ। सिपाहीहरूले कुनै हिचकिचाहट वा डर बिना, दृढ र सुरक्षित कदमहरू चाल्नु पर्छ।
सुसमाचारको जुत्ता सुरक्षित रूपमा लगाउनुपर्दछ, प्रभुले तपाईंलाई के दिनु भएको छ त्यसमा भरोसा राख्नुहोस्, सडकमा स्थिर रहनुहोस्।
आफुलाई शान्ति, आनन्द र प्रेमले भर्नुहोस् र यसलाई तपाईको वरपरका मानिसहरूलाई प्रसार गर्न दिनुहोस्। कल सबै प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न को लागी हो।
सुरक्षित चरणहरूको साथ जहिले पनि कुनै मेरो वा कुनै तीखा वस्तुमा नफर्कन हेरिरहेको छ जुन शत्रु सडकमा छोड्न सक्छ। सँधै अगाडि बढ्ने र कहिले पनि पछाडि हिड्ने छैन, परमेश्वरको राज्यमा बढ्दै।
:: परमेश्वरको हतियारमा विश्वासको ढाल
यहाँ प्रेरित पावल हामीलाई विश्वासको ढाल प्रयोगको लागि निर्देशनहरू छोड्दछन्। हामीलाई थाहा छ कि ढाल एक सुरक्षा हतियार हो जसले हामीलाई युद्धमा मद्दत पुर्‍याउँछ ताकि कुनै पनि हमलामा हामीसम्म पुग्न सकेन।
आध्यात्मिक संसारमा हामीलाई कवच पनि चाहिन्छ किनकि शत्रुले डार्ट्स फाल्दछ जुन यदि हामीसम्म पुग्छ भने त्यसले हामीलाई धेरै चोट पुर्‍याउन सक्छ।
जब हाम्रो विश्वास बलियो हुन्छ विश्वासको ढाल सही रूपमा प्रयोग हुन्छ। यसको लागि हामीले परमेश्वरको वचन पढ्नै पर्छ, यसलाई कण्ठ पार्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसलाई व्यवहारमा राख्नु पर्छ।
हामीलाई यो याद राख्नुहोस् कि विश्वास एउटा मांसपेशी जत्तिकै छ कि यदि यसलाई प्रयोग गरेन भने एट्रोफिहरू प्रयोग गरिएन भने हामी विश्वासको अभ्यास गरौं र यसलाई सुदृढ बनाउँदछौं जसले गर्दा त्यसले हामीलाई दुष्टले हमला गर्ने सबै आक्रमणहरूबाट जोगाउन सक्छ।
:: परमेश्वरको हतियारमा मुक्तिको टोप
हेलमेट हेलमेट हो कि सैनिकको टाउको रक्षा गर्दछ। सबै आर्मरको सब भन्दा महत्वपूर्ण टुक्राहरू मध्ये एक।
हाम्रो दिमाग एक वास्तविक रणभूमि हो र दुश्मनको लागि सजिलो लक्ष्य हो किनकि यसले हाम्रो सोचाइमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्दछ जसले हामीलाई नकारात्मक बनाउँछ वा हामीलाई प्रभुको वचन अनुसार सही नभएका चीजहरूमा विश्वास गराउँदछ।
हामी मुक्तिको हेलमेट वा हेलमेट प्रयोग गर्दछौं जब हामी सम्झन्छौं कि हामी विश्वासद्वारा मुक्ति पाउँछौं र त्यो सत्य हो जुन परिवर्तन हुन सक्दैन।
हामीले परमेश्वरको वचनसँग खराब बिचारहरूसित लड्न र लड्नै पर्छ किनभने उसले हामीलाई प्रेम गर्दछ र हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्यो।
:: परमेश्वरको हातहतियारमा आत्माको तरवार
यहाँ त्यहाँ ठूलो भिन्नता छ किनकि अन्य हतियारहरू हाम्रो रक्षा गर्नका लागि छन् तर यो विशेष छ किनकि यो सिर्जना गरिएको थियो त्यसैले हामी दुष्टका सेनाहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्छौं। तरवारको साथ हामी दुश्मनलाई चोट पुर्‍याउन र मार्न सक्दछौं जब हामी हाम्रो बाटोमा जान चाहन्छौं।
यसको साथ हामी आफ्नो बचाव गर्न सक्दछौं र हामी यात्रा गर्ने मार्गलाई उज्यालो पार्न सक्दछौं, यो पक्का छ कि यो शक्तिशाली छ र यो, यदि हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने जान्छौं भने, हामी विजय प्राप्त गर्नेछौं।
आत्माको तरवारको उचित उपयोग गर्न हामी परमेश्वरको वचनले भर्नुपर्दछ किनकि हामी उहाँको वचन बोल्दा तरवार सक्रिय हुन्छ। यसलाई प्रत्येक परिस्थितिमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ र जब हामी यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रभावकारी बनाउँछौं।
नबिर्सनुहोस् कि बाइबल जीवनको नियमावली जस्तो छ र यी शब्दहरू शक्ति पाउन हामीले त्यहाँ संकेत गरिएका चीजहरू गर्नुपर्दछ।
सबै आध्यात्मिक कवच विश्वास मार्फत काम गर्दछ र बीचमा बलियो हुन्छ प्रार्थना को.
हामी उनको वचन जति बढी पढ्छौं, हाम्रो विश्वास त्यति नै बढी हुन्छ र हामी हतियार अझ प्रभावकारी ढ .्गले प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं। प्रार्थना सबै कुराको लागि महत्वपूर्ण छ, पवित्र आत्माको साथ कुराकानीले स्वर्गीय पिताको इच्छा अनुसार जिउँदछ।
12 विवाह पद र विवाहका लागि बाइबल पदहरू